Sida loo farxad galiyo lamaanahaaga: tilmaamaha ugufiican | Ragga Stylish
Sida loo farxad galiyo lammaanahaaga
Lammaanuhu kuma salaysna oo keliya jacayl iyo waqti wada qaadasho. Taageerada labada qof waa muhiim. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira dad badan oo aan aqoonin sida loo qanciyo lammaanahooda markay xun yihiin. Kaalmadani waxay lagama maarmaan u tahay in la dareemo wanaag iyo in la helo xoog si looga hortago dhibaatooyinka soo ifbaxa. Sidaa darteed, qodobkaan waxaan kuugu sheegeynaa sida loo farxad galiyo lammaanahaaga.
Haddii aadan aqoon sida loo farxad geliyo lammaanahaaga, kani waa boostadaada.
1 Dhibaatooyinka nolosha caadiga ah
2 Talooyin ku saabsan barashada sida loogu farxo lamaanahaaga
3 Sida loo farxad galiyo lammaanahaaga markii laga adkaado
4 Jacaylku waa daawada ugu fiican
Dhibaatooyinka nolosha caadiga ah
Maskaxda ku hay in, in kasta oo nolosha lammaanaha ay adag tahay, haddana nolosheenna gaarka ahi sidoo kale way noqon kartaa. Waxaa jira dhibaatooyin shaqo, dhibaatooyin dhaqaale ama dhaqaale, war xun, khilaaf qoys ama saaxiib, taraafikada, burburka taleefanka gacanta, aaladaha tikniyoolajiyadda qiimaha sare leh, iwm. Wax walba waa fursado aan la koobi karayn oo ka dhigi kara lamaanaheena maalin xun. Xaaladahan niyadda xun, caajiska iyo xitaa nooc daal aad u daran ah oo ka maskax badan jirka sida caadiga ah ayaa soo muuqda.
Halkani waa meesha ay tahay inaynu samirno oo aan barano sida loogu raaxeeyo lammaanahaaga. Qofna kama badbaado dhibaatooyinka nolosha ee si xun noo saameeya. Ujeeddadu waa in looga hor tago qaab wax dhisaya, in kastoo ay jiraan waqtiyo ay dhibaatadu inaga adkaato. Haddii lammaanahaagu ku ag joogo maalin maalmaha ka mid ah kuwa murugsan, waxaa laga dhigi karaa mid lagu raaxeysto haddii aad baratid sida loogu farxo. Waxaan ku siineynaa qaar ka mid ah tilmaamaha ugu waaweyn si loo barto sida loogu farxiyo lamaanahaaga.
Talooyin ku saabsan barashada sida loogu farxo lamaanahaaga
Waxaa laga yaabaa in ta ugu baahsan uguna faa iidada badan ay tahay inaad dhageysato lamaanahaaga. Waad ku dhagaysan kartaa aamusnaan ama xitaa ku dhiirrigelin weedho gaagaaban. Muhiimadu waa inaan lagu cadaadin qofka inuu u sheego dhibaatooyinkiisa, maadaama ay jiraan qaar aan si fiican uga falcelin. Ka hadalka waxyaabaha na dareensiinaya xumaan waxay noqon kartaa mid ka mid ah daweynta ugu fiican ee dhibaatooyinka soo food saara isla markaana ka xoroobi kara eedeymaha xun. Waxa ugu fiican ayaa ah inaad ag fadhiisato lammaanahaaga oo aad ka codsato inuu isagu sharrax ka bixiyo bilowgii xiisaha la muujiyay.
Xaaladahaas oo kale, galmadu waxay noqon kartaa daawo ka hortag fiican. Haddii aad taqaanid qaar ka mid ah khiyaaligiisa, waad ka yaabi kartaa adiga oo tallaabada qaadaya. Caawinta wanaagsan ee galmada kadib, Cunnadu waxay noqon kartaa hab wax ku ool ah oo lagula macaamilo waqti xun. Waxay noqon kartaa in cuntada banaanka ama guriga. Waxaad ku raaxeysan kartaa lammaanahaaga cuntada ugu jecel. Haddii calooshu buuxdo, qalbigu wuu faraxsan yahay. Haddii cuntada lagu diyaariyo gacmahaaga, aad ayey ugafiican tahay.
Sida loo farxad galiyo lammaanahaaga markii laga adkaado
Si furan ugu sheeg markasta inuu isagu yahay shaqsi adiga qaas kuu ah adiga iyo sida aad ujeceshahay. Xitaa haddii aysan xallin dhibaatooyinkaaga, shaki la’aan waxaad dareemi doontaa wax aad uga roon adigoo ogaanaya inaad taageero ku haysato dhinacaaga. Mararka qaarkood, markii qof ku dhex milmo dhibaato gaar ah ama xaalad gaar ah, sawir buuxa kama haysa xaaladda. Waad falanqeyn kartaa macnaha guud ee wax kasta oo dhacaya oo aad si fiican ugu sharxi kartaa waxa ay yihiin faa'iidooyinka iyo qasaaraha ay leeyihiin. Tusaale ahaan, waxaa jira dad badan oo oranaya weedhaha "wax kastaaba khalad bay dhacaan", "Anigu waxtar ma leh" ama "ma haysto wado aan uga baxo". Tani waa marka aad ka dhigi karto inuu arko in wax walba ay hagaagsan yihiin oo uu sii fiicnaan doono. Xaqiiqda ah inaan halkaan ku haysto dhinacayga waxay ka dhigan tahay in labadooda dhexdooda, ay xal heli karaan xilligan.
Markaan kahadleyno inaan udhigno dhibaatada macnaha guud, kamahadleyno inaan yareynno dhibaatada ama aan iska fogeyno. Tilmaamaha qaarkood ee la adeegsado sida "waad buun-buuninaysaa" ama "maaha inay ahaato sida aad u sheegayso" waxay u horseedi kartaa wadahadal xoogaa ah, markaad isku dayeyso inaad wax hagaajiso. Xaqiiqdii, mararka qaarkood waxaa laga yaabaa inaan heysano qeybta ugu xun dhibaatada aan xitaa ku lug laheyn. Aynu tusaale u soo qaadanno tan: lamaanahayagu maalin xun ayuu ku soo qaatay shaqada oo wuu walwal qabaa. Malaha, hadaadan dulqaad badan lahayn, aan ku dambayno bixinta maalinta xun. In kasta oo aysan caddaalad ahayn, xaaladdan badanaa way dhacdaa.
Waa in lagu xisaabtamo in qofkastaaba uu u arko xaalada si gooni ah oo uu siinayo ahmiyad gaar ah oo aynaan siin karin. Intaas oo dhan ha sheegin, laakiin diiradda saar dareenkiisa oo taageer marwalba.
Jacaylku waa daawada ugu fiican
Markuu qofku xun yahay, kalgacalku waa daaweynta ugu fiican ee waqtiyada xun. Dhunkasho, salaaxid, salaaxid, isku duubid, iwm. Iyagu waa hab wanaagsan oo qofka looga caawiyo inuu la qabsado duruufaha taban. Furaha tan sidoo kale maahan in la neefsado. Taasi waa in la yiraahdo, waa inaad ixtiraamtaa waqtigiisa iyo qaabkiisa si aan cadaadis loogu saarin. Waad bixin kartaa inaad u baxdo qaxwo ama aad tamashlayn u baxdid. Waxay sidoo kale noqon kartaa hab wanaagsan oo lagula macaamilo waqti xun. La joogida dadka kale iyo neefsashada hawo nadiif ah ayaa kaa dhigi kara inaad waxyaabo si wanaagsan u aragto oo ay hagaajiso niyaddaada. Qof kastaa wuu fiicnaadaa haddii aanu kalinimo ahayn.
Waad ku dhiiri gelin kartaa inuu jimicsi wada sameeyo. Jimicsigu wuxuu soo saaraa sii deynta endorphins kaas oo hagaajiya niyaddaada. Xitaa haddii ay u socoto jimicsiga nus saac wuxuu saameyn weyn ku yeelan karaa niyaddaada.
Ikhtiyaar kale ayaa ah inaad baxdo meel ama aad daawato filim qosol badan. Waxay sidoo kale jadwal u sameyn karaan dibad bax ka duwan kan dhamaadka usbuuca. Noocyo ka mid ah dibedbaxyadan ayaa ah inay isaga la yaab ku noqdaan fiidkii isagoo daawanaya filimka uu ugu jecel yahay carruurnimadiisii ​​ama yaraantiisii. Tani waxay noqon kartaa mid aad u xiiso badan maadaama ay kicin karto dareenno tixgelin leh oo ka caawinaya kuwa hadda jira inay noqdaan kuwo lagu raaxeysto.
Waxaa jira dad doorbidaya inay kali ahaadaan si ay ula kulmaan xaaladan xun. In kasta oo ay macquul tahay inaad rabto inaad sameyso wax kasta oo suuragal ah si aad u awood ugu yeelatid rafiiqa lamaanahaaga, waxa ugu fiican ee aad sameyn kartid waa inaad fahanto inuu doonayo inuu kaligiis ahaado oo aad waqti siiso. Hadday tahay waxa uu runtii u baahan yahay, adigu waad siisaa isaga. Waa inaadan waligaa ku cadaadin inuu wax sameeyo, haddii kale waxad uga sii dari kartaa.
Waxaan rajaynayaa in macluumaadkan aad ku baran karto xoogaa tilmaamo ah oo ku saabsan sida loogu faraxsiiyo lamaanahaaga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Lamaanaha iyo Galmada » Sida loo farxad galiyo lammaanahaaga
Codsiyada ugu fiican ee lagu daawado kubada cagta